Teen | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (အဖွဲ့) / Teen
Unknown artists and album titles. Pls tell me if you know. Thanks. ၁။ အချစ်ချောင်းလေးခြားမှာစိုးတယ် – ဖြိုးကြီး ၂။ သူနဲ့သာဆိုရင် – R ဇာနည် + ရှင်ဖုန်း ၃။ လာချင်ရင် အနီးလေး – L ဆိုင်းဇီ ၄။ အချစ်ဘယ်ကစ – စည်သူလွင် + လေးလေးဝါး ၅။ မျက်လုံးချင်းစကားပြောနေပြီ – L လွန်းဝါ ၆။ မောင်လူချော- ညီသစ်ထူး + သူသူ ၇။ ချစ်တယ် – ဇော်ပိုင် ၈။ တစ်စက္ကန့်လေးရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံ – ကျော်စည်သူကျော် + … Continue Reading →
June 15, 2009 Mad Computerist ဖြိုးကြီး အခွေ (အများ) စည်သူလွင် ဂရေဟမ် ရှင်ဖုန်း ရေဗက္က၀င်း ဇော်ပိုင် ကျော်စည်သူကျော် လေးလေးဝါး ခင်ဘုဏ်း ချစ်ဆုဝေ ချစ်သုဝေ မီးမီးခဲ Lဆိုင်းဇီ Lလွန်းဝါ Myanmar Artist Rဇာနည် Teen ညီသစ်ထူး၊ သူသူ7Comments
၀၁။ အပြစ်ရှိလား – Rဇာနည်+ငယ်ငယ် ၀၂။ မမဖိုင်နယ်သူ – Examplez ၀၃။ ပျက်သုဉ်းခြင်း – ဖြိုးကြီး ၀၄။ လေချွန်နေမယ် – ဘရိတ်ကီ+ဆူဇီ ၀၅။ အချစ်ကျိန်စာ – ဆုန်သင်းပါရ် ၀၆။ မင်းရဲ့ငါ – Teens ၀၇။ အချစ်ကြောင့်လွဲမှားနေတဲ့ငါ – Rဇာနည် ၀၈။ ခွင့်မတောင်းပေမဲ့ရပါတယ် – အောင်ကောင်းထက်+ရှင်မင်းပြည့် ၀၉။ လွန်ကုန်ပြီ – ယုဇန ၁၀။ တိတ်တိတ်လေး – မေစံပယ်ညို ၁၁။ ချစ်တယ်ဆိုရုံ – ဇေယျာသော်+ငယ်ငယ် ၁၂။ သတိရခွင့် – NG2K ၁၃။ ပိုက်ဆံ…ပိုက်ဆံ – အဖွဲ့
March 3, 2009 koyazar ဖြိုးကြီး ဘရိတ်ကီ အခွေ (အများ) ငယ်ငယ် ဆုန်သင်းပါရ် ဆူဇီ အောင်ကောင်းထက် မေစပယ်ညို ယုဇန Example Rဇာနည် Teen ရှင်မင်းပြည့် ဇေယျာသော်4Comments
၁။ ရင်ခုန်သံအားငယ် – Example ၂။ အကုန်မေ့လိုက်ပါ – Bambino ၃။ မျက်နှာ – IMP ၄။ အတင်း – PAL ၅။ မင်းတစ်ယောက်သာ – Blueberry ၆။ မင်းရဲ့စိတ်နဲ့ – Teens ၇။ တစ်သက်လုံးမှာ – No ၈။ လှပြီးသား – IMP ၉။ သိပ်ချစ်ခဲ့ပါတယ် – Examplez ၁၀။ မမေးပါနဲ့ – Blueberry ၁၁။ နေတတ်သွားပြီ – Bambino ၁၂။ အရှိတိုင်း – Popcorn
February 14, 2008 mmsong အခွေ (အများ) Bambino BlueBerry Example IMP No PAL Popcorn Teen Valentine Albums 1 Comment
၁။ ပဋိပက္ခ ၂။ ထာဝရ ၃။ သီချင်းလေးအတိုင်း ၄။ မငိုပါနဲ့ကလေးရယ် ၅။ အစဉ်အမြဲ ၆။ အချစ်(သို့)ရှုံးနိမ့်ခြင်း ၇။ မင်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူး ၈။ ချစ်မှာပဲ ၉။ အလိုအပ်ဆုံးအရာ ၁၀။ သင်ခန်းစာ ၁၀၁ ၁၁။ တစ်ဘ၀လုံးချစ်မည့်သူ ၁၂။ နှလုံးသားရဲ့ကျမ်းစာ ၁၃။ လွမ်းစရာလေးတွေ
February 12, 2008 mmsong ဖြိုးကြီး အခွေ (အများ) အဲလက်စ် စိုင်းစိုင်း စည်သူလွင် ဂရေဟမ် ဆောင်းဦးလှိုင် ကောင်းမြတ် Example Lလွန်းဝါ NGIIK Teen Valentine Albums 8 Comments
ရွှေထိုက် – ရှုတိုးတိုး…. ၂၄ (၂)
၁။ ချစ်လိုက်မုန်းလိုက် – ရွှေထိုက် ၂။ အသည်းခွဲခြင်း – ငယ်ငယ် ရွှေထိုက် ၃။ ကြင်နာသူအနား – မျိုးကျော့မြိုင် ၄။ မင်းကောဘာထူးလဲ – ချစ်သုဝေ ရွှေထိုက် ၅။ ရင်ကွဲနာ – ဒွေး ၆။ အရင်လိုဘ၀မျိုးေ၇ာက်ချက်တယ် – ရွှေထိုက် ၇။ နေ၀င်ချစ်သူ – TEENS ရွှေထိုက်-> Rapidshare [Share by MYCL] ၈။ လက်ထပ်ချိန် – ဇာဖြူထွန်းလင်း ရွှေထိုက်-> Rapidshare [Share by MYCL] ၉။ ရက်စက်နိုင်တယ် – ရှင်ဖုန်း ရွှေထိုက် ၁၀။ ကမ္ဘာငယ် – သားစိုး ရွှေထိုက် -> … Continue Reading →
January 23, 2008 mmsong အခွေ (အများ) ရှင်ဖုန်း ငယ်ငယ် ဒွေး ရွှေထိုက် ချစ်သုဝေ မျိုးကျော့မြိုင် သားစိုး Teen ဇာဖြူထွန်းလင်း TEENS 8 Comments